2018 Yılında En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီ2018 တွင် R & D ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများ
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
ငါ၏အ Turkishtime အားဖြင့်ပြင်ဆင်စစ်တမ်းအရ 250 အတွက်စေ့စပ်ကုမ္ပဏီများအများဆုံး R & D အသုံးစရိတ် "R & D 2018, တူရကီရဲ့အများဆုံး R & D အသုံးစရိတ်ကုမ္ပဏီများမှစေသည်" ASELSAN 2.162.839.458 ပေါင်နှင့်အတူရှိ၏။ ဤကိန်းဂဏန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 1 ဘီလီယံ 674 သန်း TL ဖြစ်ခဲ့သည်။ ASELSAN သည်၎င်း၏စုစုပေါင်းလည်ပတ်မှု၏လေးပုံတစ်ပုံ (24) ကို R & D. သို့ခွဲဝေချထားသည်။
ဒုတိယနှင့် R&D 250 ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါ။ TUSAS, လေကြောင်းလုပ်ငန်းမှအမျိုးသားကုမ္ပဏီကြီး။ TAI, 2018 1 နယ်ပယ် 575 ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသုံးစရိတ်ကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီ၏ R & D အသုံးစရိတ်သည် 1 ဘီလီယံ TL ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ASELSAN ကဲ့သို့TUSAŞသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှု၏လေးပုံတစ်ပုံ (26) ကို R & D. သို့ခွဲဝေချထားသည်။
FORD သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် R & D 250 သုတေသနတွင်တတိယမြောက်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်တွင် R & D 250 တွင်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ 2018 တွင်ကုမ္ပဏီသည် 666 သန်း TL R & D ကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ Ford ကား Otomotiv, တူရကီရဲ့အများဆုံးတင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများကြောင့်စာရင်းလူသိများသည်အဖြစ်ကိုလည်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ R & D မရှိရင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုတင်ပို့ရတာမလွယ်ကူဘူး။ လေကြောင်းလုပ်ငန်းသည်“ အောင်မြင်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု” မဟာဗျူဟာဖြင့်ဤအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရလဒ်သည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Vestel R & D စင်တာထဲကယူမူပိုင်ခွင့်များကိုအရေအတွက်အားဖြင့်တူရကီရဲ့ခေါင်းဆောင်များ။ R & D စင်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများကြောင့် VESTEL သည် 437 မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ TURKCELL သည် 378 မူပိုင်ခွင့်တွင်ဒုတိယဖြစ်သည်။ တတိယနေရာမှာ 281 မူပိုင်ခွင့်နှင့်အံ့အားသင့်စရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
တူရကီအတွက်ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းတံတား 16 / 08 / 2012 AKDEMİRသတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး INC ။ နေရပ်လိပ်စာ: Nilufer ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်အမှတ် N ကိုလမ်း 315: 1 16140 Yildirim - BURSA တူရကီဖုန်းနံပါတ်: + 90 (224) 411 11 00 (Pbx) ဖက်စ် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်:6မတ်လ 1908 15 တထောင်၏နွေရာသီအတွက် Hejaz မီးရထားများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူစစ်သားအရေအတွက်ကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ 06 / 03 / 20126မတ်လ 1908 15 တထောင်၏နွေရာသီအတွက် Hejaz မီးရထားများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူစစ်သားအရေအတွက်ကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ဇွန်လထဲမှာ, ရထားလမ်းပြည်ထောင်စုဆန့်ကျင်သမျှသောအမြိုးအနှယျအရေးယူ ယူ. ဘုံချေမှုန်းရေးမှလွန်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လနွေရာသီအတွက် Hejaz မီးရထား61908 အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူစစ်သားအရေအတွက်က ... 06 / 03 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်း6အတွက်မတ်လ 1908 15 တထောင်၏နွေရာသီအတွက် Hijaz မီးရထားများတွင်ပါဝင်စစ်သားအရေအတွက်ကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ဇွန်လထဲမှာ, ရထားလမ်းပြည်ထောင်စုဆန့်ကျင်သမျှသောအမြိုးအနှယျအရေးယူ ယူ. ဘုံချေမှုန်းရေးမှလွန်။
အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထားထဲမှာကျင်းပမည့်ဧရာမကုမ္ပဏီကြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံ 19 / 01 / 2012 Eurasia Rail International Railway, Light Rail Systems, Infrastructure and Logistic Fair 08 - 10 ကိုမတ်လ 2012 မတ်လတွင် Istanbul Expo Centre (IFM) တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာနှင့်အတူ Kecioren-Tandogan, Çayyoluနှင့်လခြမ်းနီကန်ထရိုက်မြေအောက်လိုင်းများအတွက် Sincan- ပါတိတ်ကုမ္ပဏီ 15 နေ့ရက်ကာလ၌လက်မှတ်ရေးထိုးကြလိမ့်မည် 31 / 01 / 2012 ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ရေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Binali Yildirim၊ Kecioren-Tandogan, Kizilay-Cayyolu နှင့် Sincan-Batikent မြေအောက်ရထားလိုင်းများသည် 15 နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့တွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်:6မတ်လ 1908 15 တထောင်၏နွေရာသီအတွက် Hejaz မီးရထားများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူစစ်သားအရေအတွက်ကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လနွေရာသီအတွက် Hejaz မီးရထား61908 အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူစစ်သားအရေအတွက်က ...
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာနှင့်အတူ Kecioren-Tandogan, Çayyoluနှင့်လခြမ်းနီကန်ထရိုက်မြေအောက်လိုင်းများအတွက် Sincan- ပါတိတ်ကုမ္ပဏီ 15 နေ့ရက်ကာလ၌လက်မှတ်ရေးထိုးကြလိမ့်မည်
pre-Selection ကိုလျှောက်လွှာအတွက်Mecidiyeköy Mahmutbey အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းအချို့ကုမ္ပဏီများခဲ့သည်
အလုပ်သမားရေးရာပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များအတွက်ကျန်း Metro န်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာကြားမှာလက်မှတ်ထိုး။
Bursa Automechanika အတွက်လမ်းတံတား